ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးတစ်ယောက်လို အလန်းစားဖက်ရှင်လေးနဲ့အထာကျနေတဲ့ ရေဗက္ကာဝင်း – Cele Top Stars
ချစ်လှစွာသောပရိသတ်ကြီးရေ အသံချိုချိုလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အဆိုတော် ရေဗက္ကာဝင်း ကတော့ပရိသတ် အများအပြားရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ရေဗက္ကာဝင်းရဲ့သီချင်းဟောင်းလေးတွေကလည်း နားထောင်လို့ ကောင်းနေဆဲဖြစ်ပြီး ဘယ်တော့မှ မရိုးသွားလို့ ပရိသတ်တွေက ကြိုက်နှစ်သက်နေကြတာပါနော်….။
အဆိုတေန်ာရေဗက္ကာဝင်းက ချစ်မွှေးပါတဲ့ မျက်နှာလှလှလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင် အသံလေးကလည်း အရမ်းနားထောင်လို့ကောင်းပါတယ် ။အခုချိန်ထိလည်း လှပနုပျိုနေဆဲဖြစ်တဲ့ ရေဗက္ကာဝင်း ကလက်ရှိအချိန်မှာတော့ အေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်နေတာဖြစ်လို့ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုပိုလှပ လာပါတယ်….။
ပရိသတ်တွေကတော့ ရေဗက္ကာဝင်းကို ချစ်ကြလို့ သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို စောင့်ကြည့်ပြီး အားပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ အခုလည်း လူငယ်လေးတစ်ယောက် အလား ထင်မှတ်ရလောက်အောင် နုပျိုပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ မိမိုက်နေတဲ့ ပုံလေးတွေကိုဝေမျှလာပါတယ် ။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ရေဗက္ကာဝင်း ရဲ့ပုံရိပ်တွေကို အလွမ်းပြေ ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်…. ။
ခဈြလှစှာသောပရိသတျကွီးရေ အသံခြိုခြိုလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ အဆိုတျော ရဗေက်ကာဝငျး ကတော့ပရိသတျ အမြားအပွားရဲ့ အားပေးခဈြခငျမှုတှကေို ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ရဗေက်ကာဝငျးရဲ့သီခငျြးဟောငျးလေးတှကေလညျး နားထောငျလို့ ကောငျးနဆေဲဖွဈပွီး ဘယျတော့မှ မရိုးသှားလို့ ပရိသတျတှကေ ကွိုကျနှဈသကျနကွေတာပါနျော….။
အဆိုတနျောရဗေက်ကာဝငျးက ခဈြမှေးပါတဲ့ မကျြနှာလှလှလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့အပွငျ အသံလေးကလညျး အရမျးနားထောငျလို့ကောငျးပါတယျ ။အခုခြိနျထိလညျး လှပနုပြိုနဆေဲဖွဈတဲ့ ရဗေက်ကာဝငျး ကလကျရှိအခြိနျမှာတော့ အေးအေးခမျြးခမျြးနထေိုငျနတောဖွဈလို့ တဈနထေ့ကျတဈနပေို့ပိုလှပ လာပါတယျ….။
ပရိသတျတှကေတော့ ရဗေက်ကာဝငျးကို ခဈြကွလို့ သူမရဲ့လှုပျရှားမှုလေးတှကေို စောငျ့ကွညျ့ပွီး အားပေးနကွေတာဖွဈပါတယျနျော။ အခုလညျး လူငယျလေးတဈယောကျ အလား ထငျမှတျရလောကျအောငျ နုပြိုပွီး ရိုးရှငျးတဲ့ အလှတရားတှနေဲ့ မိမိုကျနတေဲ့ ပုံလေးတှကေိုဝမြှေလာပါတယျ ။ ပရိသတျကွီးလညျး ရဗေက်ကာဝငျး ရဲ့ပုံရိပျတှကေို အလှမျးပွေ ကွညျ့ရှုနိုငျစရေနျ ဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ…. ။